Abakhiqizi nabathengisi base China Resistive touch screen abathumeli nabathengisi | Xinhui
Isikrini sokuthinta sokumelana nohlobo oluthile lwenzwa, okuyisakhiwo sefilimu nomalazi omncane. Izinhlangothi eziseduze zefilimu elincanyana nengilazi kugqokiswe ukumbozwa kwe-ITO (Nano Indium Tin Metal oxide). I-ITO ihamba kahle futhi yenza izinto obala. Ucansi. Lapho kuthintwa ukusebenza, i-ITO yesendlalelo esezansi sefilimu izoxhumana ne-ITO yesendlalelo esingaphezulu sengilazi, futhi isignali kagesi ehambisanayo izodluliselwa ngenzwa, bese ithunyelwa ku-processor ngokusebenzisa isifunda sokuguqula, okuyi iguqulwe yaba amanani we-X no-Y esikrinini ngokubala ukuqedela iphuzu. Isenzo esikhethiwe siboniswa esikrinini.
Isikrini sokuthinta izintambo ezine
Isikrini sokuthinta izintambo ezine siqukethe izingqimba ezimbili eziphikisayo. Isendlalelo esisodwa sinebhasi eliqonde mpo emaphethelweni angakwesokunxele nangakwesokudla kwesikrini, kanti olunye ungqimba lunebhasi eliqondile enhla nangaphezulu kwesikrini, njengoba kukhonjisiwe kuMdwebo 1. ukuze
Umdwebo 1 Isihlukanisi se-voltage sitholakala ngokuxhuma ama-resistors amabili ochungechungeni 
Kala ekuqondisweni kwe-X-axis, unciphise ibhasi langakwesobunxele liye ku-0V, nebhasi yesokudla iye e-VREF. Xhuma ibhasi eliphezulu noma elingezansi ku-ADC, futhi isilinganiso singenziwa lapho izingqimba eziphezulu nezingezansi zixhumana.
Umdwebo 2 Izendlalelo ezimbili zokumelana nesikrini sokuthinta esinentambo ezine
Ukuze ulinganise ohlangothini lwe-Y-axis, ibhasi eliphezulu lincamele i-VREF kanti ibhasi langaphansi luchemele ku-0V. Xhuma itheminali yokufaka ye-ADC ebhasini langakwesobunxele noma ebhasini langakwesokudla, futhi amandla kagesi angalinganiswa lapho ungqimba oluphezulu luxhumana nongqimba olungezansi. Umdwebo 2 ukhombisa imodeli eyenziwe lula yesikrini sokuthinta izintambo ezine lapho izingqimba zombili zixhumana. Esikrinini sokuthinta izintambo ezine, indlela ekahle yokuxhuma ukuxhuma ibhasi elenzelwe i-VREF kwisikhungo sokufaka esiyireferensi esihle se-ADC, nokuxhuma ibhasi elisethelwe ku-0V esikhumulweni sokufaka esingesihle se-ADC.
Isihlukanisi sevolthi sitholakala ngokuxhuma iziphikisi ezimbili ochungechungeni
Izendlalelo ezimbili zokuphikisa zocingo lwesikrini zocingo ezine
Isikrini sokuthinta izintambo ezinhlanu
Isikrini sokuthinta izintambo ezinhlanu sisebenzisa ungqimba olumelana nongqimba oluqhubayo. Isendlalelo se-conductive sinokuxhumana, imvamisa emaphethelweni aso ohlangothini olulodwa. Kukhona oxhumana naye engxenyeni ngayinye yezingqimba ezine zesendlalelo esiphikisayo. Ukuze ulinganise kusiqondiso se-X-eksisi, cisha amakhona angenhla kwesobunxele nangaphansi kwesokunxele ku-VREF, futhi amakhona aphezulu angakwesokudla nangaphansi asezansi. Njengoba amakhona wesobunxele nangakwesokudla enogesi ofanayo, umphumela uyafana nebhasi elixhuma izinhlangothi ezingakwesokunxele nangakwesokudla, ngokufana nendlela esetshenziswe kusikrini sokuthinta izintambo ezine. Ukuze ulinganise eceleni kwe-eksisi ye-Y, ikhona eliphezulu elingakwesokunxele kanye nekhona elingaphezulu kwesokudla lisuselwa ku-VREF, futhi ikona elingezansi kwesokunxele kanye nekhona elingezansi kwesokudla lisuselwe ku-0V. Njengoba amakhona aphezulu nangaphansi asemandleni kagesi afanayo, umphumela ucishe ufane nebhasi elixhuma onqenqemeni abangenhla nabaphansi, ngokufana nendlela esetshenziswe kusikrini sokuthinta esinentambo ezine. Ubuhle bale algorithm yokukala ukuthi kugcina amandla emakhoneni aphezulu kwesobunxele nangaphansi engezansi engashintshiwe; kepha uma kusetshenziswa izixhumanisi zegridi, izimbazo ze-X ne-Y zidinga ukubuyiselwa emuva. Esikrinini sokuthinta izintambo ezinhlanu, indlela engcono kakhulu yokuxhuma ukuxhuma ikhona elingaphezulu kwesokunxele (elenzelwe eceleni njenge-VREF) kwisiginali sokufaka esihle sereferensi se-ADC, bese uxhuma ikona elingezansi kwesobunxele (elenzelwe ku-0V) kokufakwayo okuyisithenjwa okungekuhle ukuphela kwe-ADC.
I-Glass substrate yinto ebalulekile eluhlaza ekukhiqizweni kwe-TFT-LCD, futhi izindleko zayo zibala cishe u-15% kuye ku-18% wezindleko eziphelele ze-TFT-LCD. Sekwakhiwe kusuka kulayini wokuqala wesizukulwane (300mm × 400mm) kuya kulayini wamanje wesizukulwane seshumi (2,850mm × 3,050). mm), kudlule isikhathi esifushane seminyaka engamashumi amabili. Kodwa-ke, ngenxa yezidingo eziphakeme ngokwedlulele zokwakheka kwamakhemikhali, ukusebenza kanye nenqubo yezinqubo zokukhiqizwa kwama-substrates engilazi ye-TFT-LCD, ubuchwepheshe bokukhiqiza ingilazi ye-TFT-LCD yomhlaba wonke nemakethe kudala isetshenziswa yiCorning e-United States, i-Asahi Glass kanye Ingilazi kagesi, njll. Iphethwe yizinkampani ezimbalwa. Ngaphansi kokukhuthazwa okuqinile kwentuthuko yezimakethe, izwe elikhulu lami laqala ukubamba iqhaza elibonakalayo ku-R & D kanye nokukhiqizwa kwama-substrates engilazi we-TFT-LCD ngo-2007. Njengamanje, imigqa eminingi yokukhiqiza ingilazi ye-TFT-LCD yesizukulwane sesihlanu futhi ngenhla sekwakhiwe eChina. Kuhlelwe ukwethula amaphrojekthi womugqa wokukhiqiza we-crystal glass glass substrate wesizukulwane esiphezulu esingu-8.5 engxenyeni yesibili yonyaka ka-2011. Lokhu kunikeza isiqinisekiso esibalulekile sokwakhiwa kwezinto ezingasetshenziswanga ezikhiqizwayo zabakhiqizi be-TFT-LCD ezweni lami nezwe elibalulekile ukunciphisa izindleko zokukhiqiza.
Isikrini sokuthinta izintambo eziyisikhombisa
Indlela yokuqalisa yesikrini sokuthinta izintambo eziyisikhombisa siyefana nesikrini sokuthinta izintambo ezinhlanu ngaphandle kokuthi ulayini owodwa wengezwa ekhoneni elingenhla elingakwesokunxele nasekhoneni elingezansi kwesokudla. Lapho wenza isilinganiso sesikrini, xhuma ucingo olulodwa ekhoneni eliphezulu kwesobunxele ku-VREF, nolunye ucingo ku-terminal reference enhle ye-SAR ADC. Ngasikhathi sinye, ucingo olulodwa ekhoneni elingezansi kwesokudla luxhunywe ku-0V, kanti enye intambo ixhunywe kusiteshi esinereferensi esingesihle se-SAR ADC. Isendlalelo se-conductive sisasetshenziswa ukukala amandla we-voltage divider.
Isikrini sokuthinta izintambo eziyisishiyagalombili
Ngaphandle kokungeza ucingo olulodwa ebhasini ngalinye, indlela yokuqalisa yesikrini sokuthinta izintambo eziyisishiyagalombili iyefana naleyo yocingo lokuthinta olunezintambo ezine. Kwibhasi le-VREF, kusetshenziswa ucingo olulodwa ukuxhuma ku-VREF, kanti enye intambo isetshenziswa njengokokufaka okuyisethenjwa okuhle kwesiguquli sedigital-to-analog ye-SAR ADC. Ebhasini le-0V, kusetshenziswa ucingo olulodwa ukuxhuma ku-0V, kanti enye intambo isetshenziswa njengokufaka okungekuhle okuyisethenjwa kwesiguquli se-digital AD to analog se-SAR ADC. Noma iyiphi yezingcingo ezine ezisendlaleni engachemile ingasetshenziswa ukukala amandla ombane wokwahlukanisa amandla kagesi.
Langaphambilini TFT-LCD ulwelwesi switch
Olandelayo: Isitika sefilimu (izinkinobho zefilimu ezibuyiselwe emuva)